IGoogle Play iluphucula njani ukhuseleko lweapps | I-Androidsis
Indlela iGoogle Play eyanceda ngayo ukuphucula ukhuseleko lwesigidi seapps
U-2018 wawungunyaka obalulekileyo kwezokhuseleko kuGoogle Play. Amaxesha ngamaxesha ezinye i-malware zisangena kwisitora sevenkile, kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo eyokugqibela. Kodwa uGoogle uzise izixhobo ezininzi zokhuseleko zokuphucula ukhuseleko kwivenkile namhlanje. Abanye babo bayaziwa, njengo Dlala uKhuselo. Ukongeza, inkampani ikwancedile izicelo ukuba ziphucule ukhuseleko lwabo.
Sele kuyiminyaka emihlanu ukusukela Inkqubo yoPhuculo loKhuseleko kuGoogle. Ndiyabulela kuyo, uncedo lunikezelwa kubaphuhlisi bezicelo. Ukuze kube lula ukubona iimpazamo kwezokhuseleko kuzo. Into ebonakala ngathi isebenza ngoku kakuhle.
Le nkqubo yoPhuculo loKhuseleko kuGoogle yinkonzo eyinyamekelayo Hlahlela isicelo ngasinye esifakwe kwivenkile yesicelo ye-Android, baninzi ke ngoko. Le yinto eyenziwayo ukuskena ubungozi kwisicelo ekuthethwa ngaso. Ke ukuba kukho naziphi na iingxaki zokhuseleko ezifunyanwa kuyo, umphuhlisi uya kwaziswa malunga nazo. Inyathelo eliza kuthathwa.
Kwimeko apho kungekho zingxaki, iapp iyakupapashwa kuGoogle Play. Kodwa kulawo matyala apho iimpazamo zifunyenwe khona, umyalezo ufunyenwe kunye nabo. Ke umphuhlisi uya kubona uluhlu lwezinto ezisengozini. Ukongeza, baboniswa amanyathelo ekufuneka bewalandele malunga noku. Enkosi kwezi Amanyathelo anokwenza isicelo sikhuseleke ngakumbi, ukuze ipapashwe evenkileni.
Ngoku, amanani amatsha ale nkqubo afika. Amanye amanani abonisa ukubaluleka kwayo kuGoogle Play. Kwiminyaka emihlanu ukusungulwa kwayo, abaphuhlisi abangama-300.000 bancedisiwe. Lo nto ngaphezulu kwesigidi seapps silungisiwe kwivenkile. Kunyaka ophelileyo kuphela abakwazileyo ukuthintela ii -apps ezingama-75.000 ezineengxaki zokhuseleko ekupapashweni kwivenkile. Ke ngoko, ngaphambi kokuqhubeka, zonke iziphene zokhuseleko kubo zazilungiswa.
Le nkqubo iqhubeka nokusebenza nzima ekuphuculeni ukhuseleko kuGoogle Play. Ngesi sizathu, inkampani iyaqhubeka nokuzisa izixhobo ezitsha kuyo. Ukuze ezinye iintlobo zobuthathaka zifumaneke kwizicelo, kuthintele ii -apps ezingakhuselekanga ukuba zingapapashwa kwivenkile. Umceli mngeni opheleleyo, kodwa bayaphucula kancinci kancinci. Nangona ezinye iiapps zingena evenkileni ngamanye amaxesha.
Ubuthathaka obutsha bugutyungelwe
Ukongeza, obunye ubuthathaka obutsha obugqunywe kwiinyanga ezidlulileyo kwabelwana ngazo kuGoogle Play. Lo nto abaphuhlisi abafuna ukupapasha iiapps zabo kwivenkile, Ndikwazile ukuzilungisa, ukunqanda ingxaki yezokhuseleko kuzo. Njengoko iqinisekisiwe nguGoogle uqobo, kuyo yonke i-2018 a zizilumkiso ezithandathu zokhuseleko. Izilumkiso ezintsha zezi:
Iskripthi esisekwe kwifayile
Iziqinisekiso zomntu wesithathu ezivuzayo
Ke le yinto ephinde yahlalutywa xa ufuna ukufaka isicelo kwivenkile. Ke ukuba nayiphi na ifunyenwe, umphuhlisi uya kwaziswa ngayo. Unokubona amanyathelo ekufuneka uwathathile ukuphucula ukhuseleko lwesicelo sakho. Ngokwenza oku, Le app ayizukupapashwa kuGoogle Play. Ke ngoko, kubalulekile ukuba bonke abaphuhlisi bezicelo benze oku, ukuba bafuna ukubakho kwivenkile yeGoogle.
I-2019 iya kuba ngunyaka ekufuneka benze ngawo fumana uphuculo olutsha kwivenkile yeapp, ngokokhuseleko. Ke siza kubona ukuba ngawaphi amanyathelo amatsha athatyathiweyo ukuze kubekho iinkonzo ezinobungozi ezimbalwa kuGoogle Play.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Indlela iGoogle Play eyanceda ngayo ukuphucula ukhuseleko lwesigidi seapps
I-Ulefone Power 6 ityhile uyilo lwayo kwi-MWC 2019 [Ividiyo]
Ungayirekhoda njani i-WhatsApp ebiza i-Android